बिटक्वाइन के हो र कसरी काम गर्छ? - Laltin.com
बिटक्वाइन के हो र कसरी काम गर्छ?
laltin tech media July 14, 2021
असार ३०,बुधवार, २०७८ (काठमाडौं)–
बिटक्वाइन डिजिटल करेन्सी हो। यसलाई क्रिप्टोकरेन्सी पनि भनिन्छ। यसको कुनै रङ वा भौतिक रुवरुप हुँदैन। यसलाई मात्र प्राविधिक रुपमा कुनै कम्प्युटर तथा इन्टरनेटमा राख्न सकिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै देश तथा संस्थान नहुने हुँदा बिटक्वाइनद्वारा खरिदबिक्री तथा रकम आदानप्रदान गर्न बैंक जस्तो तेस्रो पक्षको आवश्यकता पर्दैन। जसले गर्दा भुक्तानी प्रणाली सजिलो र सस्तो पर्न जान्छ।
यसको कारोबारमा कुनै सीमा हुँदैन र यसको कारोबार इन्टरनेटबाट हुने हुँदा संसारको जुनै कुनाबाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ।
जसरी तपाईंले पैसा राख्न बैंकमा खाता खोल्नुहुन्छ, त्यस्तै यसका लागि पनि एउटा बिटक्वाइन एकाउन्ट खोल्नुपर्दछ। जसलाई बिटक्वाइन वालेट भनिन्छ। यसमा तपाईंको एकाउन्ट नम्बर र डिजिटल सिग्नेचर हुने गर्छ।
संसारमा जति पनि बिटक्वाइनका प्रयोगकर्ता हुन्छन्, सबैको कारोबार एउटा लेजरमा राखिएको हुन्छ। त्यसमा तपाईंको नाम र जम्मा रहेको बिटक्वाइन हुन्छ। मानौं अ ले ब लाई १ बिटक्वाइन पठायो भने संसारका सबै बिटक्वाइन प्रयोगकर्ताको लेजरबाट श्यामको खाता बाट १ बिटक्वाइन घटेको र रामको खातामा १ बिटक्वाइन बढेको तुरुन्तै देख्न सकिन्छ। यसले गर्दा कुनै मान्छेले एउटै बिटक्वाइन २ जनालाई पठाउन पाउँदैन। कुनै २ व्यक्तिबीच बिटक्वाइनको कारोबार हुँदा सो कारोबार सही हो होइन, सो कारोबार गर्ने व्यक्ति आधिकारिक हो होइन भनेर जाँच्नका लागि बिटक्वाइन माइनर (अत्याधुनिक कम्प्युटर) प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसले दुई व्यक्तिबीचको कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने काम गर्छ। सो कारोबार प्रमाणित भएसँगै बिटक्वाइनको कारोबार सम्पन्न हुन्छ।
कसरी खर्च गर्ने?
बिटक्वाइनलाई कमाउने तथा खर्च गर्ने उपाय धेरै छन्। तपाईं आफ्नो खातामा बिटक्वाइन थप्न सक्नुहुन्छ, यसका लागि अरु बिटक्वाइन प्रयोगकर्तासंग पैसा वा अन्य माध्यमबाट साट्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न तपाईंले बिटक्वाइनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
बिटक्वाइनलाई अन्तराष्ट्रिय बित्तिय बजारमा खरीद बिक्री को कारोबार गरेर कमाऊन सकिन्छ जसलाई हामी फरेक्स ट्रेड भन्छौं।
बिटक्वाइन कमाउने अर्को तरिका भनेको तपाईंले आफ्नै बिटक्वाइन माइनर (अत्याधुनिक कम्प्युटर) खरिद गरेर सञ्चालन गर्नु हो। कसैले बिटक्वाइनको कारोबार गर्दैछ भने सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्नका लागि सम्बन्धित कारोबारको एउटा जटिल गणितीय हिसाब हल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अत्याधुनिक कम्प्युटरले मात्रै क्षमता राख्दछ। त्यस्ता अत्याधुनिक कम्प्युटरले धेरै विद्युत खपत गर्ने गर्छ। तपाईंको बिटक्वाइन माइनरले कसैको बिटक्वाइन कारोबार प्रमाणित गरेबापत केही बिटक्वाइन कमाइ गर्नुहुनेछ।
कानुनसम्मत वा गैरकानुनी?
बिटक्वाइनका केही सबल पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसका केही चुनौती पनि छन्। बिटक्वाइनको कारोबार नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय नहुँदा यसको प्रयोग धेरैजसो गैर कानुनी काम जस्तै: कर छली, सम्पती शुद्धीकरण, आतंकवादी तथा ह्याकिङ गतिविधि भइरहेको छ। त्यसैले संसारका धेरै देशमा बिटक्वाइनको कारोबार गैरकानुनी मानिन्छ भने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियन जस्ता देशमा भने यसको कारोबार कानुनसम्मत मानिन्छ। नेपालमा यसलाई राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी घोषित गरेको छ।
जोखिम तथा प्रतिफल ?
यो यस्तो व्यवसाय हो जसमा अत्यधिक जोखिम हुन्छ साथसाथै अत्यधिक मुनाफा पनि। सन २००१ मा १ डलर रहेको बिटक्वाइन १४ अप्रिल २०२१ मा ६४,८९५/- डलर पुगेको थियो। यसको मूल्य स्थिर नभई निकै तलमाथि हुने गरेको छ। आजको बजार मूल्य लगभग ३२,५००/- डलर रहेको छ।
Previous: लामो अन्तरालपछि शेयर बजारमा उत्साह,२९०० को नजिक नेप्से
Next: नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल बन्यो पब्लिक कम्पनी
शेयर बजारः नेप्से किर्तिमानी यात्रा तर्क
सेयरबजारले पुन अलटाइम हाई रेकर्ड तोड्यो